I-Linq: Umhlinzeki Wakho We-Near Field Communication (NFC) Imikhiqizo Yekhadi Lebhizinisi | Martech Zone
Uma ngabe kade waba ngumfundi wesiza sami, uyazi ukuthi ngijabula kanjani ngithola izinhlobo ezahlukahlukene zamakhadi ebhizinisi. Ngibe namakhadi enothi langemva kwalokho, amakhadi ayisikwele, amakhadi ensimbi, amakhadi anamathiwe… Ngiwajabulela kakhulu. Vele, ngokuvalwa nangokwehluleka ukuhamba, besingekho isidingo esiningi samakhadi ebhizinisi. Manje njengoba sekuvulwa ukuhamba, kepha nginqume ukuthi sekuyisikhathi sokuvuselela ikhadi lami futhi ngithole ukuhleleka.
Into eyodwa engihlala ngiyesaba ukuthi mangaki amakhadi ebhizinisi okufanele awathenge nokuthi mangaki okufanele ngiwalethe kumcimbi ngamunye. Kuze kube ngenzeka ku ILinq. ILinq inolayini oyingqayizivele wemikhiqizo yamakhadi ebhizinisi edijithali afakwe kwi-NFC. Uma ungilandele isikhashana, uzokwazi ukuthi ngazama isethi yamakhadi we-NFC esikhathini esedlule kepha akuphumelelanga. Le nkampani ibinenkinga eningi ibaphrinta bese kuthi i-URL okuyiwa kuyo ibe ngaphansi kokuhlukile.
ILinq yehlukile, kufaka uhlelo lokusebenza lweselula ukwakha ikhasi lamahhala lokufika (noma ikhasi elikhokhelwayo ngokuthuthuka okuhle) kanye nohla lwamadivayisi ongawathenga ashumekwe ku-NFC. Ikhasi lakho lokufika lingaba nezixhumanisi zakho zephrofayili yomphakathi, izixhumanisi zokukhokha (i-Venmo, i-PayPal, noma i-CashApp), futhi unike amandla isivakashi sakho ukulanda ikhadi lakho lokuxhumana ukuze likungeze ngqo koxhumana nabo.
Nge-Linq Pro, okubhaliselwe kumkhiqizo wabo weLeap, unga:
Setha noma iliphi ikhasi lendawo ongathanda ukuyifaka ngaphakathi kwe- Leap izinketho.
Faka okuqukethwe okwengeziwe ekhasini lakho lokufika kweLinq. Ngingeze ividiyo ye-YouTube kepha futhi ungangeza izixhumanisi zemihlangano, i-Spotify noma isidlali se-Soundcloud.
Faka ifomu ekhasini lakho ukuze uthwebule imininingwane eyengeziwe.
Ngekhadi labo le-Premium kanye nokwenza ngezifiso okuthile, ngikwazile ukwakha ifayela le- ikhadi lebhizinisi langokwezifiso ngine-logo yami kuso (isithombe esingenhla) engingamane nginamathele esikhwameni sefoni yami bese ngikhipha noma nini lapho noma ubani ebuza noma nginikeza ikhadi lami. Esikhundleni sokunikeza umuntu ngamunye ikhadi lebhizinisi, ngiyakwazi ukulithinta efonini yabo noma baskene ikhodi ye-QR ngemuva bese belethwa ekhasini lokufika nalo lonke ulwazi lwami kanye nesixhumanisi sokulanda othintana naye ukungenisa kwami imininingwane yokuxhumana ngqo efonini yabo!
Douglas KarrUkufika Kwekhasi eLinq
Imikhiqizo yekhadi lebhizinisi ledijithali le-NFC
ILinq ayinikezi nje ikhadi le-premium engilithengile, empeleni banokukhetha okuhle kwemikhiqizo abangakhetha kukho:
Ikhadi Linq - uhlu lwezinketho zamakhadi wokusebenzisa okukodwa lapho ungazenza zicace khona, une-logo yakho ephrintiwe kuwo, noma ube nayo yonke inkambiso yangokwezifiso.
Isikhumba seLinq - isongo elilula elifakwe ku-NFC… vele uthephe isongo ngefoni yakho bese ikhasi lokuya khona livuleke.
ILinq Band ye-Apple Watch - ibhendi ye-Apple Watch eyi-NFC eshumekiwe… vele uthephe ibhendi nefoni yakho bese ikhasi lokuya khona livuleke.
Xhumanisa Ihabhu - Ideskithophu noma ihabhu lokubala elisebenza nge-NFC futhi linekhodi ye-QR kuyo elungiselelwe abantu abavakashela ideski noma idokodo lakho.
Xhuma ngokuthepha - Inkinobho epholile ye-NFC ongayinamathisela ngemuva kwefoni noma ikesi lakho lefoni. Lokhu kungabuye kwenziwe ngezifiso ngekhodi ye-QR noma i-logo yakho.
I-Linq yamaqembu ikwenza ukwazi ukulandelela ukusebenza kwenethiwekhi yamaqembu akho njengoba enikezela imininingwane yawo yokuxhumana nabanye.
Uma wenza umcimbi wokuzijabulisa, iLinq inikeza amabheji namahabhu kulabo abazobe bekhona nabathengisi. Ungalandelela ukuxhumana nokubandakanya kubo bonke ababekhona, abaxhasi nabathengisi!
Thola kabanzi mayelana nemikhiqizo neminikelo kaLinq esitolo sabo esiku-inthanethi:
Ukudalulwa: Ngibhalise njengeNxusa laseLinq futhi ngisebenzisa isixhumanisi sami sokuxhumana kulesi sihloko.
Tags: androidikhadi lebhizinisicashappikhadi lokuxhumanaifayela lokuxhumanaulwazi lokuxhumanaIPhone iosqhafazalinqlinq pronfcI-nfc apple bandnfc isongoikhadi lebhizinisi le-nfcamakhadi ebhizinisi e-nfcInkinobho ye-nfcvenmo